अन्तर्वार्ता: बादी समुदायकी महिला प्रदेशसभा सदस्य उमादेवी बादीसँग – नयाँ प्रहर
अन्तर्वार्ता: बादी समुदायकी महिला प्रदेशसभा सदस्य उमादेवी बादीसँग
काठमाडौँ, चैत्र ७ March 21, 2018
आजबाट हामी हरेक हप्ता एक-एक जना प्रतिभाशाली अथवा समाजलाई योगदान गरिरहेका व्यक्तित्वको अन्तरवार्ता प्रस्तुत गर्दै छौं।
नेपाली राजनीतिमा दलित महिलाको उपस्थिति निक्कै न्युन रहेको छ। त्यसमा पनि बादी समुदायको महिलाहरुको उपस्थिति अझै न्युन रहेको छ। यसपटक देशभर बाट एक जना मात्रै बादी समुदायकी महिला प्रदेश सभा सदस्य बनेकी छिन्। ५३औं ‘अन्तर्राष्ट्रीय जातिय विभेद उन्मूलन दिवस’को अवशरमा उनले रु. १ लाख राशीको इभा क्यासल सामाजिक न्याय पुरस्कार पनि प्राप्त गरेकी छिन्।
उनै माननीय उमादेवी बादीसँग हामीले गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दै छौं।
तपाई कहिले देखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ? के कुराले प्रेरणा दियो राजनीतिमा लाग्नको लागि?
– म बाल्यकाल देखि नै राजनीतिमा छु। करिब करिब मैले होस् सम्हालेदेखी म यो छुवाछुत विरुद्ध काम गर्दै छु। चाहे स्कुलमा पढ्दा होस् या मठ मन्दिरमा जाँदा, हामीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कताकता मनमा बिजिराख्थ्यो।
बादी समुदायबाट खासै कोही हुनुहुन्थेन बोल्नको लागि। यो विभेद अन्त्य कहिले होला, अरुसंगै हामी बराबरी बेन्चमा बसेर बोल्न कहिले पाइएला, अरु सबैजना सरी मठमन्दिरमा पुजा अक्षता गर्न कहिले पाइएला, सबैजना बोल्दाखेरी अगाडी गएर कहिले बोल्न कहिले पाइएला भन्ने कुरा चाहीं मनमा लागिरहन्थ्यो।
हिजोको दिनमा राजनीति गर्छु भनेर बाहिर निस्केदेखि आज सभासद हुँदासम्म के कति संघर्ष गर्नु पर्यो?
– कुनै पनि चिज प्राप्त गर्नलाई वा कुनै पनि लक्ष्य प्राप्ती गर्नका लागि विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नै पर्छ। विभिन्न खाल्डाहरु पार गर्नै पर्छ। त्यसमाथी पनि म त दलित, त्यसमाथी पनि बादी, त्यसमाथी पनि महिला भएको हुनाले मैले धेरै आरोह अवरोहहरु पार गरें। किनभने त्यति सजिलोसँग किनारा लाग्ने मान्छे म होइन। कतै ठाउँमा कोही नभएकाले मैले धेरै चुनौती सहनु पर्यो यहाँसम्म आइपुग्न।
घरपरिवारको साथ कतिको रह्यो राजनीतिक यात्रामा?
– मेरो परिवारको, श्रीमानको र समग्र समुदायको समेत धेरै सहयोग रह्यो मलाई। अरुको पनि सहयोग भएको छ, यो होइन कि मेरो समुदायको मात्रै साथ छ, मलाई माया गर्ने र यो ठाउसम्म ल्याइपुर्याउने सबै जना हुनुहुन्छ।
पहिले पनि समानुपातिक सुचीमा हुनुहुन्थ्यो?
– अहिले म समानुपातिकबाट संसदमा आएको छु।
७० सालको चुनावमा पनि मेरो नाम समानुपातिकको सूचीमा थियो। तर मेरो क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको खासै राम्रो भोट आएन; प्रत्यक्ष उमेद्वारले जित्नु पनि भएन। त्यसकारण, म दोस्रो संविधानसभाको सदस्य भईन।
अहिलेसम्म दलित महिलाहरुको हकहितको लागि के-के गर्नु भयो?
– ७० सालमा चुनाब हारेदेखी ७४ सम्ममा नेपाल सरकारसँग भएको सहमती कार्यान्वयन गराउनका लागि वर्षमा २-३ पटक विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न मन्त्रीहरु, सभासदहरु, पार्टी सभापति लगायतका व्यक्तित्वहरुलाई घचघचाउने कुरा, आवश्यकतालाई औल्याउने कुरा गर्नमा मबाट कतै कमी भएन।
प्रदेशसभामा कस्तो भूमिकामा काम गर्दै हुनुहुन्छ?
– नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश ७मा प्रतिपक्षमा रहेकोले म मन्त्रीमण्डलमा छैन। विभिन्न समितिहरु बन्ने क्रममा छन् र म ती समितिमा आफ्नो योग्यता र इच्छा अनुसार बस्नेछु। मेरो भूमिका हिजोको दिनमा पनि एकदमै सक्रिय थियो, आज पनि छ, र भोली पनि रहनेछ।
अब ५ वर्षको कार्यकालमा तपाइँ के-के काम गर्न चाहनुहुन्छ?
– दलित महिला संगसंगै सबै देशका महिला, विदेशमा जानुभएका युवाहरुको लागि समेत आत्मसम्मानका साथ बाच्न मिल्ने वातावरण बनाउन चाहन्छु। महिलालाई आधा आकाश ढाक्ने भन्छौं हामी, तर आधा अधिकार पनि दिएका छैनौं। वहाहरुलाई सम्मान सहित त्यो जिम्मेवारी दिनु पर्यो। उचित सम्मान र अधिकार पनि उहाँहरुलाई दिनुपर्यो। महिलाले अवसर पाएपछी गर्न सक्छन्। महिलाको हकहितको लागि, दलित अधिकारको लागि म हिजो पनि पछी परिन, आज पनि पर्ने छैन।
अब अहिलेको जल्दोबल्दो विषयमा कुरा गरौँ। धेरै तर्फबाट अहिले आरक्षणको विरोध भइरहेको छ। आरक्षणको बारेमा तपाइको व्यक्तिगत धारणा के हो?
– आरक्षण हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हैन भने एउटा दलित महिला एउटा राम्रो संपन्न महिला सित अथवा पुरुष सित लड्न सक्दैन। हामीले चुनाव लडेर मत पाऔंला राम्रो, तर… तर कतै न कतै तर लागिहाल्छ दलित महिला अरु महिला सरी लड्न चाहीं सक्दैनन्।
तपाइको राजनीतिक आकांक्षा के हो? अझै कति अगाडी सम्म पुग्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ?
– मैले कुर्सी र पावरको लागि राजनीति गरेको होइन। मलाई कुर्सी नभएपनि हुन्छ। किनभने एकजना बादी समुदायको महिला एकै पटक राष्ट्रपतिको सपना देख्नु राम्रो नहोला। तर सोच्दैमा फरक चाहीं पर्दैन। किनभने डाडुपन्यु चलाउने महिला पनि कलम चलाउन सक्छन। त्यसैले महिलालाई जिम्मेवारी दिनु पर्छ।
दलित महिलाहरुको उत्थानको लागि के गरिनु पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
– महिला सशक्तिकरणको लागि विभिन्न सरकारी निकायले तालिम, प्रशिक्षण दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अवसरै पाएन भने महिला अगाडी कसरी बढ्न सक्छ र!
अबको ५ वर्षमा के के गर्छु भन्ने सोच छ तपाइको?
– राष्ट्रीय बादी अधिकार संरक्षण समिति र नेपाल सरकार बीच जे सहमति भएको हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउछु भन्ने मेरो विश्वास छ। र ५ वर्षपछी म प्रदेशसभाबाट निस्कदै गर्दा दलित महिलाहरुलाई अन्य नागरिकहरू सरह सम्मान सहित यो देशमा बस्न पाएको, आत्मविश्वास सहित बोल्न सकेको, बादी महिलामाथी हुने गरेको यौन शोषण अन्त्य भएको, र पुन:स्थापना भएको हेर्न चाहन्छु।
दलित महिलाहरु राजनीतिमा किन लाग्ने?
– अन्तत: मुक्ती दिने भनेको राजनीतिले नै हो। हामी सडकमा जतिसुकै नारा लगाएपनि कुनै मुद्दा प्रभावकारी बन्ने भनेको त सदनमा गएर नै हो। अहिलेको अवस्थामा सबै पार्टीहरुले महिलाको कुरा उठाएका छन्।
तपाई सभासद भइसके पश्चात बादी समुदायलाई समाजले हेर्ने द्रिश्टिकोणमा केही परिवर्तन आएको छ?
– विगत ३०० वर्षबाट बादी समुदाय भनेर हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले धेरै फरक भएको छ। यो समुदायबाट पनि प्रदेश ७को सभासद भएको छ नि। अब यो समुदाय सित इज्जतले बोल्नु पर्छ। यिनीहरुले पनि यो देशको सबै कुरा गर्न सक्छन्। क्षमता भएको, योग्यता भएको छन् भन्ने भएको छ।
दलित प्रतिको विभेद हट्न कति समय लाग्ला जस्तो लाग्छ तपाईलाई?
– ठ्याक्कै यति उति भन्न त सक्दिन। तर सकारात्मक बिचार प्रवाह भई रह्यो भने छुवाछुत अन्त्य चाहीं हुन्छ। छिट्टै हुन्छ। र हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।
(नयाँ प्रहरको लागि सिर्जना विश्वकर्माले २०७४ चैत्र ६ गते लिनुभएको अन्तर्वार्ता।)
← अर्थ संकलनको लागि समर्थ नेपालले ‘इम्प्याक्ट हाइक’ आयोजना गर्दै
युरोपियन युनियनको रिपोर्टमा आपत्ती जनाउँदै परराष्ट्र मंत्रालयको आयो यस्तो विज्ञप्ति →